बर्दियाको भुरिगाउँमा जारी महोत्सवमा आज गायक हेमन्त शर्मा-सांगितीक दुँनियामा कसरी चर्चा कमाए ? (विशेष जानकारी सहित)
गायक अर्जुन कौशल,रुपा जिएम,मोडेल हिमानीको विशेष प्रस्तुति हुने
हरपल नेपाल संवादाता
प्रकासित मिति : २०७३ माघ १९, बुधबार प्रकासित समय : १०:३४
बर्दिया,माघ १९ । बर्दियाको भुरिगाउँमा माघ १४ गतेबाट सुरुभएको सुचना,प्रविधि तथा कृषि महोत्सव २०७३ को आज छौटौं दिन,दर्शकहरुलाई मनोरंजन दिनकालागि नेपाली संगीत प्रेमी नागरिकहरु माझ अत्यन्त लोकप्रिय गायक हेमन्त शर्मा,रुपा जिएम,मोडेल हिमानी ढुङगाना लागाएत आधा दर्जन कलाकारहरु आउने भएका छन ।
आयोजकले आज हेमन्त शर्मा र मोडेल हिमानीकोे विशेष प्रस्तुतिबाट दर्शकहरुलाई व्यापक मनोरंजन दिलाउने आफ्नो प्रयास रहेको बताएको छ । उक्त स्थानमा हुने अन्य कार्यक्रममा समेत दर्शकहरुले गायक हेमन्त शर्माको व्यापक माग गर्ने गरेका थिए । आज आफ्नै क्षेत्रमा लोकप्रिय कलाकारहरु आउने जानकारीसँगै स्थानीयवासीहरु अत्यन्त उत्साहित भएका छन ।
आयोजकले हरपल नेपालसँगको कुराकानीमा आजको कार्यक्रममा गायक अर्जुन कौशल,रुपा जिएम लगाएत अरु स्थानीय कलाकारको समेत प्रस्तुति रहने बताएको छ ।
को हुन हेमन्त शर्मा ? सांगितीक दुँनियामा कसरी चर्चामा कमाए ?
उनको जन्म नवलपरासिको त्रिवेणी भन्ने शान्त र सुन्दर एक गाउँमा भएको हो । बुवा सरकारी जागिरे भएकाले नेपालको विभिन्न ठाउँमा फरक फरक सामाजिक परिवेशको अनुभूति गर्दै उनको वाल्यकाल बित्यो,हाल उनको घर भैरहवामा रहेको छ ।
सानैहुदाँ रेडियो नेपालबाट बज्ने गितहरु सुन्न छिमेकिहरुको घरमा पुग्ने गायक हेमन्तमा हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेझै साँगीतिक क्षेत्रमा पहिल्यै देखिको लगाब रहेको थियो ।
सानैदेखि मनमा गीत संगीत प्रतिको लगाब भएपनि उनले त्यो अन्र्तनिहीत प्रतिभालाई देखाउने राम्रो मौका पाएका थिएनन । उनले १२ कक्षा पढ्ने क्रममा भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा पहिलो पटक स्टेजमा गएर ‘टाढाँ टाढाँ,नौ डाडाँबाट आए तिमीलाई सम्झेर’ भन्ने बोलको गीत गाए,त्यतिबेला उनको आवाजको सबैले प्रशंसा गरेका थिए । त्यहि प्रेरणाले उनलाई यस क्षेत्रमा अघिबढ्न हौसला पनि प्रप्त भएको उनले बताएका छन ।
अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं आएका हेमन्तले पढाइ भन्दा पनि साँगीतिक क्षेत्रमा दिनानु दिन सँगीत श्रोताहरुको मन जित्न सफलता प्राप्त गरे,उनी सांगीतीक कार्यक्रमहरुमा जताबाट पनि पुग्ने गर्दथ्य ।
उनले २०५७ साल सम्म विभिन्न ८ वटा गीतहरु रेकर्ड गरे र २०५९ सालमा आफ्नो पहिलो एल्बम निकालेका थिए । पहिलो एल्बमको गीत ‘माया सारै महंगो’ बोलको गितको अत्याधिक सफलताले उनलाई नेपाली श्रोताहरुमाझ लोकप्रिय गायकको रुपमा स्थापित गराएको थियो ।
उनले आफुलाई श्रोताहरुले हौसायर प्रिय कलाकार बनाएको र आफ्नो सफलतामा दर्शक,श्रोताहरुको मुख्य साथ र माया रहेको बताएका छन ।
उनको -थाप न थाप हातैमा मायाको चिनो मायालु,माया सारै मंहगो,माया त यस्तो होस , आउदै गर मालति आउदै गर न, बदनामै हुन्छु तिम्रो नाममा, फुल हौ भने रसाइदेउ बोलका गीतहरु अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छन । उनले आफु बाँचुन्जेल गीत संगितलाई निरन्तरता दिने इच्छा भएको यसअघिको एक कार्यक्रमा बताएका थिए ।
सुडान । सैन्य कू को विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी खार्तुममा टायर बालेर सडकमा अवरोध पुर्‍याएका